Dhibbanayaal Ruux ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waqtigii Axdigii Hore, Cibraaniyadii waxay wax walba ku bixin jireen allabari. Marxalado kaladuwan iyo duruufo kaladuwan ayaa u baahnaa dhibbanaha, sida: T. qurbaan la gubo, ama qurbaan hadhuudh ah, amase qurbaanno nabaadiino, ama qurbaan dembi, ama qurbaan dembi. Dhibane kasta wuxuu lahaa qawaaniin iyo qawaaniin gaar ah. Dhibbanayaashu sidoo kale waxaa la sameeyay maalmaha ciidaha, bisha cusub, dayaxa buuxa, iwm.
Masiixa, Wanka Ilaah, wuxuu ahaa allabari kaamil ah, oo loo bixiyey Malachi oo dhan (Cibraaniyada 10), taasoo ka dhigtay allabaryada axdiga Hore mid aan loo baahnayn. Sidii Ciise u yimid inuu sharciga oofiyo, oo uu uga sii weynaado, si ujeedada qalbiga ay dembi u noqon karto, xitaa haddii aan la fulin, sidaas oo kale isaguna wuu buufiyey oo ballaariyey nidaamka dhibanaha. Hada waa inaan sameynaa sadaqo.
Waagii hore, markaan aqriyo aayadda koowaad ee ka timaada Rooma 12 iyo aayadda 17aad ee Sabuurka 51, ayaan madaxa kor u taagay oo waxaan ula jeedaa, haa, dabcan, allabaryada ruuxiga ah. Laakiin waligey ma qiran lahaa in aanan fikrad ka haysan micnaha tani. Waa maxay dhibane xagga ruuxa ah? Oo sidee baan u sadqeeyaa mid? Miyaan helayaa wan ruux leh, oo korkiisa saaraa meel allabari ruuxeed, oo hungurigayga mindiyo addimmo ku gooyo? Mise Bawlos wax kale ma ula jeedaa? (Tani waa su'aal hadal-celin ah!)
Qaamuusku wuxuu dhibbanaha ku qeexaa "ficil allabari wax u qiima badan ilaahnimada." Maxaan haysannaa oo Ilaah ku qiimeeyo? Isaga waxba ugama baahna. Laakiin isagu wuxuu doonayaa ruux jaban, duco, amaan iyo jirkeena.
Kuwani waxaa laga yaabaa inaysan u muuqan sidii allabaryo waa weyn, laakiin aan bal aan ka fiirsano waxa ay dhammaan kuwan uga dhigan yihiin aadanaha, dabeecadda jidhka. Furashadu waa gobolka dabiiciga ah ee aadanaha. Ku daynta ruux jabtay micnaheedu waa iska dhiibida kibirkayaga iyo kibirkeena wixii aan dabiiciga aheyn: is-hoosaysiinta.
Tukashadu - lahadalidda Ilaah, dhageysiga isaga, ka fikirka eraygiisa, wehelnimada iyo isku xirnaanta, ruux xagga ruuxa - waxay nooga baahan tahay inaan iska dhiibno waxyaabo kale oo aan u baahan karno si aan waqti ula qaadanno Ilaah.
Ammaanu waxay dhacdaa markaan ka fikirno fikirkayaga nafteenna oo aan diiradda saarno Ilaaha weyn ee caalamka. Mar labaad, xaalada dabiiciga ah ee qofku waa inaad naftaada ka fikirto. Ammaanu waxay ina keentaa qolka carshiga Rabbiga, halkaas oo aannu ku caabudno jilbahayaga hortiisa boqornimadiisa.
Rooma 12,1 wuxuu ina farayaa inaan jidhkeenna u bixinno sidii allabari nool, oo quduus ah oo Ilaah ka farxiya, kaas oo cibaadadayada ruuxiga ahi ka kooban tahay. Halkii aan u hureyn lahayn jirkeenna ilaahay adduunka, waxaan nafteenna u diyaarsanahay Ilaah jirkeenna oo aan ku caabudno wax qabadkeena maalinlaha ah. Ma jiro kala-goyn u dhexeeya wakhtiga adeegga iyo waqtiga ka baxsan adeegga - nolosheenna oo dhan waxay noqonaysaa adeeg markii aannu jidhkeenna galno meesha allabariga ee Ilaah.
Haddii aan maalin walba allabari u bixin karno Ilaah, khatar uguma jirna inaan la qabsanno adduunkan. Waxaa loo beddelaa annaga oo daadineyna kibirkayaga, rabitaankeenna iyo rabitaankeenna waxyaalaha adduunyo, mashquulkeenna nafsadda iyo is-jeclaanteena koowaad.
Ma bixin karno allabaryo ka qaalisan ama ka qiimo badan kuwan.